Top 6 Tracker SMS Softwares in lagu jaajuuso Mobile SMS
Softwares basaas SMS waa nooc ka mid ah smart phone socodka Softwares taas oo ka caawisa socdaan fariimaha qoraalka ah ee aad. Iyada oo ku xidhan baahidaada, waxaad ka iibsan kartaa Softwares kuwan. Waa inaad iyaga soo dajiyo dibna waxa aad bilaabi kartaa raadraaca iyo hubi fariimaha qoraalka ah isla.
Dadka isticmaali Softwares tracker sms u badan oo ka mid ah sababaha. Tusaale ahaan, haddii aad tahay waalid oo aad ogtahay in carruurtaada si joogto ah waa in u la xiriiro dadka kale via fariimaha qoraalka ah ka dibna waxaa laga yaabaa in walaac weyn in aad ogaato, waxaa lagu kuwaas oo ay SMS iyo waxa ay aayadaha. Noqoshada waalid, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh tallaabo kasta oo aad run ahaantii aanad doonayn carruurtaada in ay is dhaafsadaan fariimaha la nooc ka mid ah dadka qalad. Softwares Waxa laga yaabaa in aad u baahan tahay in la dhiso xisaabaadka ay goobta iyo mar aad samaysay oo dhan nidaamka ah, waxa aad bilaabi kartaa in ay la socdaan fariimaha ku qoran guddi gacanta u gaar ah. Sidaas darteed haddii aad ka welwelsan tahay in carruurtaada ama shaqaalaha waxaa ku aflagaadeeyay fariimaha qoraalka ah ama mudnaanta sida markaas waa wakhti, waxaad ka heli mid ka mid ah Softwares si ay u khawano fariimaha qoraalka ah ka carruurtaada, ilaaliyaan waxqabadka shaqaalaha ama looga hortago tuugada. Qaybta ugu fiican waa in Softwares, kuwaas oo aan laga arki karo article bartilmaameedka phones.This bari doonaa sida si ay ula socdaan fariimaha qoraalka ah.
Talooyinka la isticmaalayo tracker SMS ah
Top 6 tracker SMS Softwares in lagu jaajuuso SMS mobile
mSpy, tracker sms u iPhone ah, waa mid aad u hufan u ah la socodka oo dhan soo diray, galaysa iyo xataa fariimaha tirtiray telefoonka iyo wixii la arrimaha lagu xusay. Oo kaliya dhowr ilbiriqsi gudahood, log user la updated ka dib markii aad soo dirtay ama helay farriin.
GPS raadraaca aad u saamaxaaya in ay ula socdaan meesha uu phone bartilmaameedka. Tani waa dhab ahaantii loo baahan yahay si loo hubiyo in ilmahaaga ma aha in shirkadda xun.
It kaa caawinaysaa in aad si ay ula socdaan oo dhammuna waxay dhacdooyin taariikheed iyo hawlaha phone in.
 Waxaa kaa caawinaysaa in aad la socon waxa E-mail-lada loo soo diray ama lagu helay si aad ka heli karto haddii uu qof isku dayayo inuu fadeexad aad carruurta ama qoyska ama aad ogaan kartaa haddii mid ka mid ah aad shaqaale ayaa qorsheynaya been abuur ah oo idinka soo hor jeedda.
 Waxaad xitaa ka eegi kartaa taariikhda dhirta iyo xataa kulli websites bookmarked aaladaha ay. Tani si dhab ah wax yaabahan muhiim u ah waalidiinta oo aan rabin in ilmahoodu u noqon on websites da'da-aan habboonayn ee.
 Socodka kuma koobna oo kaliya in ay fariimaha qoraalka ah. mSpy xitaa aynu aad u helida adeegyada IM iyo codsiyada sida sida WatsApp iyo Skype iwm kuwan oo jira siyaabo ugu badan iyo ugu dambeeyay ee isgaarsiinta kaasi oo loo adeegsaday ayaa maanta dadka waaweyn iyo carruurta.
 mSpy gelineya inaad aragto liiska xiriirada oo dhan iyo sidoo kale.
 mSpy ka caawisaa si ay ula socdaan Guda wac aaladaha bartilmaameedka, sawiro qalab iyo, statistics chat iyo shabakadaha bulshada la socodka online ah.
 Waxaa la jaan qaada Windows, Mac OS iyo macruufka.
 Waa arrin si fudud loo heli laga nooc kasta oo ah browser.
 mSpy bixisaa 24/7, caawimaad luqadeed kala duwan.
OS supported- Android macruufka, Mac OS Windows iyo.
• Aad u hufan oo fudud in la isticmaalo
• Waxay bixiyaan natiijada tayada
• software jeelyihiin in lagu kalsoonaan karo
• Qiimaha noqon kartaa khasaaro ah oo loogu talagalay dadka qaar
• fursadaha aad u badan oo uu noqon karaa mid ka yara wareeriya qaar ka mid ah
App Tani waa ay awoodaan in ay raad ku helay, soo diray ama la tirtiro fariimaha. Arrimaha weyn No ayaa laga helay iyadoo app, laakiin waxa ay noqon kartaa yara gaabis ku saabsan xawaaraha warbixinta oo lagu helo inuu dhawr daqiiqadood ah.
 Waxaa gelineya inaad si ay ula socdaan iyo fariimaha qoraalka ah view
 Waxaad la socon kartaa iMessage iyo xitaa fariimaha WatsApp
 Track GPS goobta
 Waxaad u helida fariimo Twitter iyo Facebook
 Waxaad ka heli kartaa log yeedho iyo xitaa taariikhda browser
 photos Track ee qalab bartilmaameed
 Monitor E-mail-lada (cid dir oo soo helay), liiska xiriirada iyo cadaymaha.
 Waxaad xitaa xannibi karaa barnaamijyadooda la socda qalabka in
 Waxay leedahay doorasho Panel LIVE si aad xitaa la socon karaan shaashada LIVE qalab iyo ma noqon doonto la arki karo ee phone bartilmaameedka.
OS supported- Android iyo Blackberry.
• Waxaad ka eegi kartaa liiska xiriir dhamaystiran, wac abuse
• Waxaad u helida dhamaan fariimaha ku
• goobta Track GPS
• View xogta tirtiray ka qalab bartilmaameed
• Waxaad awoodi doontaa inaad si ay ula socdaan E-mail-lada kaliya haddii qalab bartilmaameed u yahay BlackBerry ama iPhone ah
SpyBubble awood u muujinaya oo dhan farriimaha soo socda oo soo dirin, waxa si kastaba ha ahaatee, ka boodi kartaa qaar ka mid ah wixii la tirtiray kaliya ka dib markii ay soo muuqatay shaashadda. Xawaaraha .Wadashaqayntaas ayaa lagu helay in ay la aqbali karo.
 qiimo la goyn karo
 Waxaa la socon kara inta badan OS sida Symbian, Blackberry, macruufka, Android iyo Windows
 software Tani waa si buuxda u arki karin; ma la arki karo oo ku saabsan qalab bartilmaameed.
 Waxaad u helida iyo u arkaan fariimaha qoraalka ah, abuse yeedho, E-mail-lada, sawiro qaaday in qalab, qorin dhamaystiran.
 Waxaad u helida Farriinta nidaamyada sida BBM, iMessage iyo WatsApp iwm iyo xitaa socdaan taariikhda browser ay la socdaan faahfaahinta sida joogta ah websites kuwa lagu soo booqatay oo xitaa mudada
 Waxaad xitaa soo diri kartaa amarrada hago u deactivating qaar ka mid ah muuqaalada software ah.
 ula socdaan hawlaha iyo Guda ballan duubay qalab.
 ula socdaan meesha GPS qalab ah
 mid aad u fudud in ay isticmaalaan
 Runtii lagu kalsoon yahay
 Waxay bixisaa gargaar 24/7
OS supported- Symbian, Blackberry, macruufka, Android iyo Windows.
• Waa software Discrete. Walxood No, dhawaaqa, fariimaha ama logos laga arki karo qalab bartilmaameed.
• Download iyo rakibidda waa iska sahlan.
• biilasha netavisen, war biilkaaga aan ku tusi doonaa magaca software ah.
• Si fudud loo heli karo, aad u helida xogta meel kasta, waqti kasta.
• waafaqsan OS waasac
• No biilasha soo noqnoqda
• Waxaa la iman 60 maalmood lacag damaanad dib
• 24/7 gargaar
• Waxaa ka shaqeeya oo keliya telefoonada smart, xitaa ma uusan dhacsan telefoonada smart.
Spyera waa ool ah in raad dhan fariimaha. Xitaa xawaaraha .Wadashaqayntaas waa arrin wanaagsan, laakiin had iyo jeer, waxay ku guuldareysto in ay muujiyaan qaar ka mid ah qoraalka la tirtiray in guddi ay gacanta.
 Waxaad dhegaysan kartaa in ay ku noolaadaan baaqyo iyo xitaa u qoraan ugu baaqay nool.
 Waxaad dhegaysan kartaa waxa dhacaya agagaarka qalab in ay siyoodba ku mikroofanada of qalab bartilmaameed oo aad noqon doontaan si ay u qoraan in sidoo kale ay awoodaan.
 basaaso iMessages ah, Facebook, BBM, WatsApp iyo socdaan hawlo badan oo kale oo goobta bulshada, track E-mail-lada, files Warbaahinta, akhri dhan u cid dir oo farriimaha soo socda oo ay la socdaan iyagoo og kuwa iyaga soo dirin ama kuwa fariimaha la diray.
 Track taariikhda browser, goobta GPS of qalab bartilmaameed, View cinwaanka buugga dhamaystiran iyo faahfaahintooda, u arkaan yeedho gasho iwm
 "buufinta SMS" aad u saamaxaaya in ay diraan farriimaha la arki karin ka phone bartilmaameedka in tiro kasta cayimay.
 Marka qofka badala card uu SIM, waxaad si toos ah aad u soo sheegi oo ay la socdaan tirada cusub iyo faahfaahinta akoonka.
 Haddii bartilmaameedka ayaa telefoonka bedelay, xitaa inayna kartaa software ah in qalab cusub oo dhan waxaa lagu gacanta loo maarayn karo on account web aad iyo, haddii aad rabto in aad uninstall software si fudud u samayn karto iyo in, aad ma u baahan doonaan inay helaan Devi bartilmaameedka
OS supported- Symbian, Blackberry, Apple iyo Android.
• Qeybta ugu wanaagsan waa in ay feature hago gelineya inaad si ay u maareeyaan dhammaan hawlaha ka fog.
• Waxaad u helida dhan fariimaha iyo GPS goobta
• View tirtiro xogta qalabka
• Ma heli fursad u xannibi websites / keywords
iSpyoo ayaa la ogaaday in ay si fiican u shaqeeyaan in raad fariimaha, laakiin haddii user helo mugga weyn ee fariimaha qoraalka ah ee waqti gaaban, ka dibna waxaa la helay inay u boodboodaan farriimaha qaar ka mid ah.
 Waxaad u helida buugga cinwaan oo dhan iyo u arkaan dhammaan faahfaahinta kale, wac Guda iyo xitaa Viber ugu yeedhay isagoo aan helo tilifoon bartilmaameedka.
 Waxaad u helida dhamaan fariimaha, E-mail-lada, wax kasta oo loo qorsheeyey kulan, hawlaha qoraalada ama galeen phone bartilmaameedka
 Waxaa uu leeyahay muuqaalada laga cabsado sida dhegeysiga Call Live iyo Call duubo Live oo dhan taas waxa laga sameeyaa discretely.
 Waxaad ka eegi kartaa taariikhda browser, Facebook, iMessages, Skype, WhatsApp iyo faahfaahinta kale ee goobta bulshada.
 By kaakicin makarafoonka, aad xitaa maqli karaa codka ku xeeran, iyo in la barto wax kasta oo ka dhacaya agagaarka qalab bartilmaameed iyo doorasho "ku hareeraysan record" aynu aad u qor wax walba oo ka dhacaya agagaarka qalab.
 Waxaad la socon kartaa GPS goobta, sawirada iyo videos soo qaatay qalab.
 "dhidbidda SMS" aad u saamaxaaya in ay diraan farriimaha la arki karin ka phone bartilmaameedka in tiro kasta cayimay.
 Waxaa gebi ahaanba la arki karin.
OS supported- macruufka iyo Android
• rakibo Easy
• raadraaca oo dhamaystiran dhamaan fariimaha iyo macluumaad kale oo discretely
• lagu kalsoon yahay
• taageero Macaamiisha ma aha in si dhaqso ah.
TheTruthSpy qabtaan si aad u wanaagsan in raad dhan fariimaha. Laakiin, iyadoo aan loo eegin model ah ee telefoonka ama OS ah, xawaaraha .Wadashaqayntaas ay yar tahay waxoogaa.
 Waxay kaa caawinaysaa in aad si ay ula socdaan dhamaan fariimaha iyo dhammaan soo wacitaanada galaysa iyo kuwa baxaya iyo xitaa iyaga u qoraan.
 Waxay kaa caawinaysaa in aad tartanka orodada oo dhan E-mail-lada oo lagu helay ama soo diray.
 GPS-socod oo aad awood u si ay ula socdaan meesha uu phone bartilmaameedka
 Waxaad xitaa ka eegi kartaa taariikhda dhirta iyo xataa kulli websites bookmarked aaladaha ay.
 TheTruthSpy kuu ogolaanaysaa inaad socdaan dhaqdhaqaaqyada shabakadaha bulshada iyo codsiyada track sida WatsApp, Skype iyo Facebook iwm
 TheTruthSpy gelineya inaad aragto liiska xiriirada oo dhan iyo sidoo kale.
 Waxay ka caawisaa si ay ula socdaan Guda wac aaladaha bartilmaameedka, iyagoo sawiro / videos iyo qalabka meesha fog ka.
Qaar ka mid ah qaababka aan shaqaynayn sida la filayo ay ka mid yihiin goobta GPS ah, taariikhda gallery iwm
Talooyinka isticmaalaya SMS ah tracker-
Inkastoo iibsashada software SMS-socod ah, waa in aad had iyo jeer xajiya waxyaalaha qaar ee mind-
Software waa in uu ahaadaa si sahlan loo isticmaali kale aad aakhirka qaadan doonaa qasan oo aan idiin noqon doonaa awood u isticmaalno si sax ah sida baahidaada. Isla tagaa loogu rakibo. Waa in aan qaato in ka badan daqiiqo qaar ka mid ah, waana in si deg deg ah bilaabi shaqeeya.
Waxaa jira wax badan oo Softwares suuqa oo ay siiyaan badan oo ka mid ah qaababka. Ka hor inta wax iibsiga, oo aad gebi ahaan waa war sababta aad u heli lahayd si aad u qaadan kartaa wax soo saarka saxda ah.
No ajuurada maqan
Ka hor inta wax iibsiga, in la hubiyo in wax soo saarka uusan lahayn Wax lacag ah maqan / eedeeyay bil kasta.
> Resource > Top List > Top 6 SMS Tracker Softwares in lagu jaajuuso Mobile SMS